असल छिमेकीको दायित्व यहि हो ? सिमा मिच्ने र समस्या थप्ने « Post Khabar
असल छिमेकीको दायित्व यहि हो ? सिमा मिच्ने र समस्या थप्ने
Published on: 13 May, 2020 4:18 pm
सुनिदैछ भारतमा यात्रु बाहक रेल चल्ने भयो रे, त्यो रेलले हालको परिस्थितिमा मान्छे सँगै कोरोना संक्रमित पनि बोक्ने निश्चित नै छ । हालकोे अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपालमा भारतीय कामदार बसेकै छन । तर हाम्रा नेपाली नागरिक भारतबाट किन लखेटिएका छन् ? भारतले नेपालीहरुलाई दशगजा क्षेत्रमा ल्याएर अलपत्र किन छाडेको छ ? के असली छिमेको हुनुको नाता यहि हो ? सिमा मिच्ने देखि समस्या थप्ने मात्र ! सिमानासम्म आइपुगेकाहरुलाई पनि कमिसनको आड्मा नेपाल भित्र लुकिछिपी प्रवेश गराइन्छ भन्ने सुनिएको छ । चाहे त्यो भारत अथवा नेपालबाट किन नहोस त्यस्ता दलालहरुको पहिचान गरि कानूनि कार्वाही गर्नुपर्छ ।
नेपालमा अवैधानिक बाटोवाट हुने प्रवेश रोक्नुुपर्छ । हाल नेपालको स्थिति हामी नेपालीलाई जगजाहेर नै छ , हाल करिव पचास लाख भन्दा वढी युवा विदेशीन बाध्य छन् । अनुमानित आकँडा अनुसार पाँच लाख बढी नेपाली नेपाल फर्किने मनोसाय बनाएका छन । मेरो बिचारमा ती युवा केवल कास्टिङ मात्र हुन फिल्म बाँकी नै छ । पाँच लाख बढी त फर्किन पाएको खण्डमा भारतावाट फर्किने संभावना छदैछ । यतिबेला नेपालमा भारतबाट फर्किने मै कोरोना संक्रमण ज्यादा देखिएको तथ्यांकले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
दोस्रो कुरा, तेस्रो मुलुकको पाँच लाख युवा नेपाल फर्किन चाहदा कति सम्भब होला ? मानौ ती पाँच लाख युवा (भारत बाहेक) अन्य मुलुक बाट फर्काउने हो भने नेपालमा भएका प्लेन ले दिनमा तीन पटक ल्याउदा पनि करिब (३००) तीन सय पूरा लाग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा केवल सरकारलाई सराप्दा समस्या समाधान हुने होइन क्यारे ! त्यसैले कामना गरौ भोकै मर्न कुनै पनि नेपालीलाई नपरोस । विदेशमा हुने नेपालीलाई नेपाल सरकारले, आफ्नो तर्फबाट कति सम्भब छ नेपालीको रक्षाका निम्ति सम्बन्धित देशसँग समन्वय गर्दै तिनीहरुको समस्या समाधन गरोस । साथै निजि क्षेत्रले पनि त्यस्तै खाले सहयोगको गरोस । नेपाल ल्याउदैमा समस्या समाधान हुने होइन । जो जहाँ छ त्यहाँ बस्नु नै अहिलृ उपयुक्त होला । पाँच लाख नेपाली मात्र भित्राएर समस्याको समाधान हुने होइन समस्या झन–झन विकराल परिस्थितिको निर्माण हुन पुग्र्छ । किनकी क्वारेन्टाइन राख्न पनि सम्भव नभएको अवस्थामा, महामारी हुदाँ थेग्न नसक्ने अस्पताल लगायत अन्य पूर्वाधार बिना कसरी सम्भब होला ?
मानविय नाताले ती हाम्रा दाजु भाई लाई आश्वासन दिन त सकिएला तर व्यवहारमा उतार्न सक्नु पो सफलता हो । सरकार आफ्ना नागरिक प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ नै तर परिस्थिति हेरेर समस्याको आकलन गरि थेग्न सकिन्छ वा सकिँदैन बुझिकन निर्णय गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ । भावनामा कोहि पनि वहकिनु हुन्न । सिमा क्षेत्र वन्द गरौ आगामी दिन झनै खतरा पुर्ण हुने देखिएकोले लकडाउन होइन कर्फ्यु लगाउन परे पनि पछि हटनु हुन्न । नत्र लास फ्याल्न पनि ट्रकले भ्याउने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । उदाहरण बिकसित मुलुक कै देखिएकै छ । यो आपतकालीन स्थिति पार लाउन सके हामी अवस्य पुनः यहि नेपाली माटोमा आफ्नै जन्मभुमीमा रमाउला, यहाँका पाखा पखेरामा हरियाली ल्याउला ! सबै मिलेर कामना गरौ आ–आफ्नो ठाउँबाट सरकारका निर्देशन पालना गरौं । हामी रहे कसो नभेटौला भेटेर पीडा साटासाट गर्दै रमाइलो गरौला ।